Wakiilka Gareth Bale oo xaqiijiyey haddii uu xiddigu ka tagayo Kooxda Real Madrid oo uu u dhaqaaqi doono Shiinaha – Gool FM
Wakiilka Gareth Bale oo xaqiijiyey haddii uu xiddigu ka tagayo Kooxda Real Madrid oo uu u dhaqaaqi doono Shiinaha
Haaruun October 30, 2019
(Madrid) 30 Okt 2019. Wakiilka weeraryahanka kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa hoos u dhigay wararka soo jeedinaya inuu xiddigan uu wakiilka u yahay ka tagayo garoonka Bernabeu oo uu u dhaqaaqi doono horyaalka Shiinaha.
Xiddiga xulka qaranka Wales ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inuu ka dhaqaaqi doono caasimadda Spain intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, laakiin ugu dambeyntii wuxuu la sii joogay kooxda macallin Zinedine Zidane.
Mustaqbalka dheer Gareth Bale ee Real Madrid waa mid aan ammaan ahayn oo aan la hubin, laakiin daafacii hore dambeedka bidix ee kooxda Tottenham Hotspur ayaa u safray Magaalada London Isniintii si uu ula kulmo wakiilkiisa, iyadoo la isla dhexmarayo xaaladda mustaqbalkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Jonathan Barnett ayaa u muuqday inuu ka quustay soo jeedinta ah in ciyaaryahanka uu wakiilka u yahay u aado Shiinaha, halka 69-sano jirkaan uu sidoo kale ku adkeystay in Bale uu ku faraxsan yahay inuu u ciyaaro Real Madrid.
“Gareth wuu ku farxsan yahay inuu u ciyaaro Real Madrid. Shiinaha? ha rumeysanin wax waliba oo aad aqriso,” ayuu Barnett u sheegay Warsidaha Deportes Cuatro.
Tiro ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League ayaa sidoo kale la la xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono suuqii xagaaga 30 sano jirkaan, kaasoo labo gool dhaliyey labo kalena dhiibay lix kulan oo horyaalka La Ligaha Spain uu u ciyaaray kooxdiisa Los Blancos illaa iyo hadda xilli ciyaareedkan.
Lampard oo ka hadlay guuldarradii 4-0 aheyd ay kala kulmeen Man United, kahor kulanka ay caawa isaga hor imaan doonaan Carabao Cup